အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “သရဲခြောက်သောဘိန်းဖြူ: အမျိုးသမီးများထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာခဲယူပြီးနေကြသည်” ဂျို Benecke ကရေးသားခဲ့သည်, ကြာသပတေးနေ့ 23 အောက်တိုဘာလအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2014 09.08 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဖြစ် 31 အောက်တိုဘာလချဉ်းကပ်မှု, ရုပ်ရှင်လောကသားနှစ်ဦးသို့ဆက်နေသောအပိုင်းသုံးပိုင်း: ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေ, နှင့်မကျင့်သောသူတို့ကိုလည်း. ငါမကြာခဏအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အထီး chauvinism မြှင့်တင်ရန်အဖြစ်အနုပညာရှုတ်ချအဆုံးစွန်သောအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များကိုနားထောငျ. အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများ "နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း porn" လုနီးပါးလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုအသုံးပြုသည်, ထိုဘော်ဒါဆောင်နှင့်စော franchises ရည်ညွှန်းအတွက်. တူညီတဲ့ယေဘုယျအခြားအမျိုးအစားများအကြောင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့လျှင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ? "ရဲ့ Be ပါစေရဲများကသည်နောက်တွဲယာဉ်ဒါနဲ့ကောငျးကြိုးအတှကျဟာသပေါ်တက်ပေးခြင်းတာပါမကောင်းတဲ့လှပါတယ်။ " "ငါဒိုင်ယာနာဒါနဲ့နောက်ထပ်ဒရာမာကိုကြည့်ဘယ်တော့မှတာပါ။ ကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့သညျကွား"
ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်တွေ, အားလုံးရုပ်ရှင်တွေတူ, စတိုင်များအမျိုးမျိုးအတွက်လာ, ဟယ်လိုတူဆယ်ကျော်သက်တုတ်ဓားကနေ, အော်ဟစ်ခြင်းနှင့် Sorority Row, ခွေ့-အခမဲ့ဖို့ Diabolique တူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ chillers, အဆိုပါသရဲအခြောက်, Rosemary ရဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်, အဆိုပါအခြားသူများ, နှင့် The Ring ကို. ဘုံ၌အဘယျငါစာရင်းင်အပေါငျးတို့သဇာတ်ကားတွေရှိဘူး, သို့သော်, သူတို့၏ဗဟိုအမျိုးသမီးအရေးပါသောဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်. ပိုပြီးင်အဘယျသို့, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လွန် Bechdel Test ကို.
တကယ်တော့, ထိတ်လန့်အမျိုးသမီးဆောင်ကိုရှာဖွေထားတဲ့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်. ထိုအခြင်းမရှိ, ဤအဇာတ်ကားတွေအားလုံး "သူမအိမ်ရှေ့တံခါးမှထွက်ပြေးရပါမည်သည့်အခါအမြဲတမ်းလှေကားကိုတက်ပြေးသူပြုမူမဟုတ်နိုင်သူအချို့ကြီးတွေ-ရင်သားကင်ဆာမိန်းကလေး" အကြောင်းမဟုတ်, Neve ကမ့်ဘဲလ်ရဲ့ဆစ်ဒနီမြို့ Prescott ကိုပထမဦးဆုံးအော်သံရုပ်ရှင်အကြံပြုအဖြစ်.
ဂျင်း SNAP ... မောင်နှမရင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဝံပုလွေအကြောင်းရုပ်ရှင်
ဆယ်ကျော်သက်ဝံပုလွေဇာတ်ကားချင်း SNAP (2000) မောင်နှမရင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းအားလုံးရုပ်ရှင်အထက်ဖြစ်ပါတယ်; အဆိုပါဆင်းသက်လာ (2005) - တစ်ဦး All-မိန်းကလေးစွန့်စားမှုခရီးစဉ်အိပ်မက်ဆိုးလှည့် - ဖိအားအောက်မှာအမျိုးသမီးချစ်ကြည်ရေးမှာပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးကြည့်ရှုကမ်းလှမ်း; အံသွား (2007), လိင်အင်္ဂါ dentata အကြောင်းရုပ်ရှင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်ဆန့်ကျင်ပြန်တိုက်ခိုက်နေမိန်းကလေးတစ်ဦး၏တစ်ဦးတောက်ပစာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်; mama (2013) မိခင်မေတ္တာနှင့်ကလေး-ကလေးများကိုကျွေးမွေးပြုစုတစ်ခုရှာဖွေရေးဖြစ်ပါသည် (သရဲတစ္ဆေနှင့်အတူ); နှင့်ရှိထား (2014) - လိင်တူချစ်သူ Rosemary ရဲ့ကလေး - ကှသာယာစှာရည်မှန်းချက်များတစ်မိသားစုကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုပြသထားတယ်.
ဒီဟယ်လို, စာရေးဆရာ / ဒါရိုက်တာဂျနီဖာ Kent ရဲ့အင်္ဂါရပ်ပွဲဦးထွက်အဆိုပါ Babadook ဗြိတိန်တွင်ဖွင့်လှစ်. အဘယ်သူ၏သားငယ်စစ်မှန်တဲ့လာမယ်စတင် horrid ခန့်မှန်းချက်များအပြည့်အဝတစ်ဦးကြောက်စရာရုပ်ပုံစာအုပ်တွေ့တစ်ခုတည်းမိခင်အကြောင်းကိုအပြင်ပန်းတစ်ရုပ်ရှင်; ရုပ်ရှင်ဝမ်းနည်းခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးလေ့လာမှုတွေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အထီးထီးနေခြင်း, Single-မိဘတစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ငါသိမြင်င့်မိဘအပြစ်. အမျိုးသမီးအဆိုပါတိုက်လို့ခေါ်ကြတယ်, ရုပ်ရှင်လည်းအပေါင်းတို့၏အကြီးမားဆုံးမညီကြောင်းလေ့လာစူးစမ်းဖို့ဝံ့: သူမ၏ကလေးအတွက်မိခင်တစ်ဦးခံစားချက်မုန်းတီးမှု. အထိခိုက်မခံ gag တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူသူများသည်အနားယူနိုင်, အသှေးထှကျသံယိုအချက်နိမ့်သည်အဖြစ်. သို့သော်, သငျသညျခေတ်ရေစီးကြောင်းရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦး Bechdel-သွားတာသဘာဝတရား၏မြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ် (သင်တစ်ဦးလူလတ်ပိုင်းမိခင် listlessly သူမ၏ vibrator ကိုရှာဖွေရန်သူမ၏အပ်ချုပ်သေတ္တာသို့ရောက်ရှိနောက်ဆုံးသောကာလ watched သောအခါ?)
သငျသညျအဆိုပါ Babadook စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အပေါ်ကိုပတေရု Bradshaw
ထို DVD ကိုရှေ့တွင်, သင့်ရဲ့မိန်းကလေးပါဝါလိုအပ်ချက်တွေအားလုံး cheerleader Die Lucky McKee နဲ့ Chris Sivertson ရဲ့ cheerleader တ-ဖုတ်ကောင်-စုန်းတောက်များလွှတ်ပေးရန်အားဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်. McKee ရဲ့ oeuvre နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မည်သူမဆိုမိမိအသှေးထှကျသံယို likes သိရကြလိမ့်မည် (ကောင်းစွာမ), ဒါပေမဲ့သူလည်းမကြာသေးမီနှစ်အရှိဆုံးအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများအချို့ကိုတာဝန်ရှိသည်င်: မေ, အဆိုပါဝုဒ်, မိန်းမကြီး, ယခုအခါ cheerleader. အမျိုးသမီးဆက်ဆံရေးပေါ်မှာရှိသမျှရုပ်ရှင်တွေကိုအလယ်ဗဟို, အများဆုံးအလယ်ပိုင်းရှိ (မမြျှောလငျ့ဘဲ) လိင်တူချစ်သူဇာတ်ကောင်, နှင့်ကိုလေ့လာခြင်း၏မညီမျှမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ. ဒါဟာကောင်းသော = မိန်းကလေးမရှိရိုးရှင်းတဲ့အမှုဖွင့်, ကောင်လေးတစ်ယောက် = မကောင်းတဲ့; အမှန်တကယ်ညံ့သောအထီးဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းကြောက်စရာ, အကုန်လုံးအမျိုးသမီး.
လွယ်ကူသောအဖြေကိုကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်မဟုတ်; McKee ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေပေါ့ပါးတဲ့တုတ်ဓားများကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ - သူတို့ကအမှန်တကယ်အစာရှောင်-အရှိန်အဟုန်နှင့်မှတ်မိလွယ်တဲ့ရုပ်ရှင်တေးသံများနှင့်အတူရယ်စရာများမှာ - ပေမယ် garish တဲ့ pop-ယဉ်ကျေးမှုမျက်နှာပြင်ခြစ်ရာနှငျ့သငျအလုပျမှာအစွန်းရောက်ကျားမဇာတ်ကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်. McKee ကိုယ်တော်တိုင်ငါ့ကိုပြောထားပါသည်, "တချို့လူများကပစ်ချနေကြသည် [cheerleader], အထူးသဖြင့်ယောက်ျားတွေရုပ်ရှင်ထဲတွင်ယောက်ျားလေး၏အနည်းဆုံးသူရဲကောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲသွားကြောင်းယူဆသူကို။ "
ခေတ်ပြိုင်ရုပ်ရှင်ရုံ၏တာ unexciting နှင့် retrogressive feeling နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ယူဆချက်ကိုစိန်ခေါ်နှင့်ထိတ်လန့်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းပေးသည့်အခါဤအရာဟယ်လိုဝင်းအောင်မအဘယ်ကြောင့်? သငျသညျအစဉ်အမြဲ "အနုပညာအိမ်သူအိမ်သား" အဖြစ်ကစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ပိုကောင်းခံစားရစေသည်လျှင် "Thriller" သို့မဟုတ် "လွတ်လပ်သော".